ဆရာ/မများအကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်လာရဖွယ်ရှိ | ngalone
This entry was posted in အထွေထွေ and tagged သတင်း. Bookmark the permalink.	← ဝံလက်ရဲ့အားမာန် နှင့်အခြားကဗျာများ-ခိုင်လင်း(မေဃဝတီ)
One response to “ဘူးသီးတောင် နှင့်မောင်တောမြို့နယ်များရှိ
ဆရာ/မများအကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်လာရဖွယ်ရှိ”	Hla Wai
Reply	ခမီး အမျိုး သ္မီး ဘက် က အမျိုး သ္မိး အသင်း နဲ့ ဘူးသ၊ိး တောင် မြို့ နယ် အသင်း က ပါ ဝင် ပြိး ကေ တရား စွဲ ပါ။ ကုန် ကျ ငွေ ကို ကောက် ခံ ပြိး အေး စေ တီ ဆရာ တော် မှ တဆင့် ပန့် ပိုး ပါ မည်။ အကျိုး အကြောင်း ကို myattha2@gmail.com သို့ ပို့ ပေး ပါ။